Back to the Sizzle: Olee otú E-Azụmahịa Marketers nwere ike iji ihe okike na-ebuli nlaghachi | Martech Zone
Laghachi na Sizzle: Olee otú ndị na-ere ahịa E-azụmahịa nwere ike isi jiri ihe okike mee ka ọ dịkwuo mma nloghachi
Tọzdee, Machị 3, 2022 Tọzdee, Machị 3, 2022 Paul Childs
Mmelite nzuzo nke Apple agbanweela ka ndị na-ere ahịa e-commerce si arụ ọrụ ha. N'ime ọnwa ole na ole ka ewepụtara mmelite ahụ, ọ bụ naanị obere pasentị nke ndị ọrụ iOS abanyela na nsochi mgbasa ozi.
Dị ka mmelite June ọhụrụ si dị, ihe dị ka 26% nke ndị ọrụ ngwa zuru ụwa ọnụ kwere ka ngwa soro ha na ngwaọrụ Apple. Ọnụọgụ a dị obere na US na naanị 16%.
Enweghị nkwenye doro anya iji soro ọrụ onye ọrụ gafee oghere dijitalụ, ọtụtụ atụmatụ mkpọsa nke ndị ahịa na-adabere na ya agaghịzi ekwe omume. Ndị na-ere ahịa e-azụmahịa ga-enwe oge siri ike dị ka ihe ike ike ha mere iji na-echetara ndị ọrụ ngwaahịa ndị ha lere anya ma ọ bụ hapụ n'ime ụgbọ ala ha agbadala nke ukwuu.
Agbalịrịa na ezi mgbasa ozi nsuso usoro agaghị ada n'akụkụ kpamkpam, mana ha ga-agbanwe nke ukwuu. Uru nke okporo ụzọ na-enye ike igbochi mgbasa ozi mgbasa ozi (LAT) na-eto eto na ụwa post-14.5, na nsonaazụ ka mma ha na-enye maka okporo ụzọ LAT na-akpali ndị na-ere ahịa ka ha kwụọ ụgwọ dị elu karịa ka ha mere n'oge gara aga. Iji nweta uru nke usoro ndị a na ndị ọzọ, ndị na-ere ahịa e-azụmahịa ga-adị mkpa ka ha gbanwee ụzọ ha si emepụta mgbasa ozi. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ụzọ ndị bụ isi ihe okike ga-abụ ngwá ọrụ dị oke mkpa maka ịga nke ọma e-azụmahịa, yana ndụmọdụ maka ndị na-ere ahịa na-achọ ịbawanye nlọghachi ha na mmefu mgbasa ozi ka mgbanwe ndị a na-emetụta.
Enweghị data onye ọrụ na-achọ ihe okike nwere mmasị sara mbara
Ihe okike mara mma na nke mbụ ga-enyere ndị na-ere ahịa aka ịmata onwe ha dị iche iche n'ahịa ahịa juru, ọbụlagodi na-ejighi ngwa ebumnuche. Ka ha na-agbalị iru eru ka ukwuu, azụmahịa na-amalitekarị na-enweta mgbasa ozi na-adịghị mma na nke ọ bụla. Mana nkedo ụgbụ ka obosara agaghị apụta n'ichepụta ihe. Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịdabere n'ịbịakwute otu onye, ​​ihe okike gị ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume nye ọtụtụ mmadụ n'otu oge. Ndị mgbasa ozi na-etinye ego n'ichepụta ihe pụrụ iche ga-adị mfe ịnweta oge na ịchọta ndị ahịa ọhụrụ n'akụkụ kachasị nke mgbịrịgba.
Ịmepụta mgbasa ozi na-enyekwa ohere ịkọrọ ụwa ụdị mmadụ ika gị. Maka ọtụtụ ụdị, nke ahụ ga-apụta ijikọ ihe onyonyo na-adọrọ adọrọ na ozi dị ike. Enweghị data ọkwa onye ọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mkpa maka ndị mgbasa ozi ka ha wepụta ihe okike nwere mmetụta, na-eji ụda olu doro anya na-ebuga ahụmahụ ndị ahịa na-echefu echefu. Ndị mgbasa ozi kwesịrị ilekwasị anya na ozi na-ejikọta ụkpụrụ nke ụdị na ndụ ndị ahịa. Were ya na onye ọ bụla na-ahụ ihe na-emepụta mgbasa ozi gị na-enweta akara gị maka oge mbụ; kedu ihe onye ahịa ahụ kwesịrị ịma gbasara ụlọ ọrụ gị? Jiri usoro ịkọ akụkọ na-akpali akpali mee ka ozi na-adịgide adịgide guzozie n'ụzọ doro anya, dị ike. Dị ka okwu ire ere ochie na-aga: mẹ l'ẹka ono, ree eswi.
Tụgharịa mbọ organic iji jikọọ na ndị na-azụ ahịa ebe ha nọ
Ndị na-azụ ahịa nke oge a na-atụ anya ka ha nwee ike ịkparịta ụka nke ọma na iji ụdị akparịta ụka gbasara ihe dị ha mkpa. Ihe okike dị irè na-enye ohere ka ụdịdị ahụ nye ụdị mkparịta ụka ahụ site na atụmatụ organic dị ka mgbasa ozi mgbasa ozi. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi ọha na eze na-enye ndị ọrụ nhọrọ inye onwe ha ụfọdụ data igwe mmadụ iji nyere aka melite ahụmịhe ha. Ijikọ na ndị na-azụ ahịa ebe ha na-ezukọ ugbu a abụghị ihe na-enweghị isi, yana ikike ebumnuche ebumnuche nke nyiwe na-enyere aka iweghachite ụfọdụ nkọwa igwe mmadụ efu efu na-enweghị nsochi mgbasa ozi. A na-enyekwa ndị na-eri ihe ike karịa mgbe ọ bụla iji votu na obere akpa ha, yabụ ndị mgbasa ozi kwesịrị ịkụnye ihe okike ha - yana mkparịta ụka ọ na-akpali - n'echiche na echiche nke ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Jiri ngwaahịa ewu ewu dochie ndụmọdụ ndị dị mkpa
Usoro nzuzo ọhụrụ nke Apple ga-akwụsị n'ịhazi atụmatụ ngwaahịa kpọmkwem dabere na omume ndị ahịa gara aga maka onye ọ bụla na-egbochi nsochi. N'ebe ngwaahịa ndị yiri ya, ndị mgbasa ozi kwesịrị ilekwasị anya n'ihe na-ewu ewu. Ihe nrụpụta mgbasa ozi nke na-egosipụta ngwaahịa a na-ere nke ọma na-eme ka itinye ego amamihe dị na ya n'ihi na ọ na-ekpughe ma ndị ahịa na-atụ anya ya na ndị dị adị na ihe ndị ị maralarị na-ebugharị agịga maka azụmahịa gị.
Echiche igwe na-enye ndị na-azụ ahịa obi ike na ụdị ọhụrụ ma na-eme ka ha nwee ike ịzụta ngwaahịa ndị ọgbọ ha ma ama. Ọ bụ ya mere igosi ndị na-ere ahịa kacha mma na mgbasa ozi gị bụ ụzọ dị mma isi mee ka ntụkwasị obi dịkwuo elu ma duzie ndị ahịa ọhụrụ site na oghere ahịa, ọbụlagodi na-enweghị isi data dị omimi banyere ndị ha bụ na ihe ha na-eche banyere ha.
Gosipụta isi ihe dị iche na njirimara ngwaahịa pụrụ iche
Ụdị nwekwara ike na-emeso enweghị nkọwa zuru ezu banyere ndị na-atụ anya ahịa dị ka ohere ime ka isi ihe dị iche iche na-eme ka ngwaahịa ha pụrụ iche. Ịtụle data ahịa ga-enyere ndị ahịa aka ikpebi ihe na-eme ka ngwaahịa ha ghara ichefu echefu. Mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike ịmepụta ihe na-akwalite ihe ndị ahụ, dị ka ngwaahịa na-arụ ọrụ nke ọma na nha, eriri ọkọnọ na-adigide, ma ọ bụ iji ihe emegharịrị emegharị.
Ige ndị ahịa gị ntị maka ihe na-emetụta ha bụkwa atụmatụ na-enye aka; nyocha ndị ahịa m na ntinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta maka nghọta pụrụ iche n'ihe ndị ahịa hụrụ n'anya maka ika gị wee mepụta ihe okike na-eme ememme ndị ahụ. Ma atụla egwu ịdabere na isi ihe dị iche nke kpaliri ndị ahịa gara aga ka ha bụrụ ndị na-eguzosi ike n'ihe n'ezie, n'agbanyeghị otú ha na-atụghị anya ya.
Ihe okike ga-adị obere ahaziri yana nke pere mpe na ụwa mgbe 14.5 gasịrị. Mana ọkachasị ka ọnụọgụ nnabata nnabata nke mgbasa ozi na nnabata na-abawanye maka iOS 14.6 na karịa, ihe okike ga-abụ ngwa dị oke egwu maka ndị mgbasa ozi na-achọ ijikọ ndị na-azụ ahịa ọhụrụ yana ihe ịga nke ọma nye ndị na-ege ntị amaghị. Dị ka ọ dị na ihe ọhụrụ teknụzụ niile, evolushọn bụ ụzọ na-aga n'ihu. Ka ndị mgbasa ozi nwee ihe ịga nke ọma, ọ ga-adị ha mkpa imeghari ma kwalite nghọta ha maka imepụta ihe yana ọtụtụ ngwa ya siri ike.
Tags: apple nzuzookikeecommercendị na-ere ahịa ecommerceahia ecommerceiosokporo ụzọ LATlaghachi na mgbasa ozilaghachi na okike
Paul Childs bụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ahụmịhe karịa afọ 15 na-ewu ma na-eto eto azụmahịa mgbasa ozi ekwentị zuru ụwa ọnụ na oghere mmemme n'ofe ma akụkụ ihe achọrọ yana inye. O nweela ọtụtụ ọkwa onye isi na ọkwa VP na C gbasara mmepe azụmahịa, ọrụ, ire ahịa na ire ahịa. Paul mebere Adfonic na 2008, nke gara n'ihu wee bụrụ otu n'ime ndị DSP ekwentị mkpanaaka n'ụwa niile. N'oge na-adịbeghị anya, Paul bụ Chief Revenue Office na Smadex, ebe o nyere aka itolite na pụọ ​​​​azụmahịa na Entravision. Paul bụ ugbu a VP Business Development na MOLOCO.
Ụdị atọ maka mgbasa ozi ụlọ ọrụ njem: CPA, PPC, na CPM
Iji rata ndebanye aha email, ndị mbipụta ga-eji ndenye nbipute egosipụta ikike nkeonwe ha